दुःखद खबरः जाजरकोट जीप दु’र्घ’ट’नामा वडाध्यक्षसहित ६ जना रहेनन्! – PathivaraOnline
Home > समाचार > दुःखद खबरः जाजरकोट जीप दु’र्घ’ट’नामा वडाध्यक्षसहित ६ जना रहेनन्!
जाजरकोट । जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिकामा बुधबार जीप दु’र्घ’ट’नामा परी ६जनाको मृत्यु भएको छ । दु’र्घ’ट’नामा वडाध्यक्षसहित ६ जनाको मृत्यु भएको छ । सोही घटनामा परी एकजना बेपत्ता भएका छन् एकजना घाइते भएका छन् । जाजरकोट सदरमुकाम खलङ्गाबाट जुनीचाँदे गाउँपालिकाको केन्द्रतर्फ गइरहेको भे १ ज ९३५ नम्बरको यात्रुवाहक जीप गाउँपालिका १ को औल खोला भीरमा दु’र्घ’ट’ना भएको हो ।
जाजरकोट प्रहरीका अनुसार ज्यान गुमाउनेमा गाँउपालिकाको वडा नम्बर ११ का वडाध्यक्ष अमरबहादुर शाही, वडा नम्बर ११ कै ६२ वर्षीय कृतिबहादुर शाही, लालबहादुर बुढा र त्यही वडाका स्वास्थ्यकर्मी ३२ वर्षीय खेमराज शाही हुन् । त्यस्तै वडा नम्बर ५ गर्खाकोटका २९ वर्षीय कृष्णबहादुर शाही र गर्खाकोट मटेलाकी २५ वर्षीया मालिका बस्नेतको ज्यान गएको डीएसपी किशोर श्रेष्ठले बताए ।
एक जना भने मजकोट खोलामा बेपत्ता भएको अनुमान गरिएको छ । उनको खोजी कार्य जारी रहेको प्रहरीले बताएको छ । दु’र्घ’ट’नामा घा’इ’ते भएका वडा नम्बर ११ का नरबहादुर बुढालाई उपचारकालागि जिल्ला सदरमुकाम खलङ्गा लगिएको छ । औल खोला भीरबाट खसेको गाडी झण्डै तीन सय मिटर तल रहेको मजकोट खोलामा परेको थियो । अहिले गाडी खोलामै छ ।
वडाध्यक्ष शाहीको श’व निकालिसकिएको छ भने अन्यको श’व पानीभित्रै खोलामा रहेको र निकाल्न पहल भइरहेको डीएसपी श्रेष्ठले बताए । गाडी चालक गोरख बस्नेत भने फ’रा’र रहेकाछन् । घटनास्थल सदरमुकाम खलङ्गादेखि झण्डै २० कोस पश्चिममा पर्छ ।
जाजरकोट सदरमुकाम खलङ्गाबाट जुनीचाँदे गाउँपालिकाको केन्द्रतर्फ गइरहेको भे १ ज ९३५ नम्बरको यात्रुवाहक जीप गाउँपालिका १ को औल खोला भीरमा दु’र्घ’ट’ना भएको हो । जाजरकोट प्रहरीका अनुसार ज्यान गुमाउनेमा गाँउपालिकाको वडा नम्बर ११ का वडाध्यक्ष अमरबहादुर शाही, वडा नम्बर ११ कै ६२ वर्षीय कृतिबहादुर शाही, लालबहादुर बुढा र त्यही वडाका स्वास्थ्यकर्मी ३२ वर्षीय खेमराज शाही हुन् ।
खुशीकाे खबरः यसरी हट्दैछ पोखरामा पनि तुइन